We She Me: Context
အနီရောင်ဟာ ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်ပါသလဲ မေးလိုက်ရင် ဒီလို ပြန်ဖြေကြမယ်။ `ရဲရင့်ခြင်း´၊ `သွေး´၊`အန္တရာယ်´၊`သတိ´၊`မီး´၊ `ရမ္မက်´... စသည် စသည်ပေါ့။ မီးပွိုင့်က အနီရောင်က ဘာ အဓိပ္ပါယ်လဲ မေးလိုက်ရင်တော့ အားလုံးက ပြန်ဖြေကြမယ်။ `ရပ်´။ ဘာကြောင့် တညီတညွတ်ထဲ အဖြေတစ်ခုတည်း ပေးရသလဲဆိုတော့ အားလုံးဟာ Context တစ်ခုထဲမှာ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြောဆိုနေကြလို့ပါ။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ခေါင်းစဉ် တူသော်လည်း Context ကွဲပြားနေရင် စာ/စကားတွေရဲ့ ဦးတည်ချက်ဟာ ကွဲပြားနေနိုင်ပါတယ်။ စာတစ်ပုဒ်တည်းကိုပင် ရေးသူနဲ့ ဖတ်သူရဲ့ Context မတူရင်လည်း ရေးသူ ပြောလိုတာကို ဖတ်သူက မရပဲ ဖတ်သူက သူလိုရာကို သူယူသွားနိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူ အချင်းချင်းမှာပင် Context မတူတဲ့ အတွက် စာတစ်ပုဒ်ဟာ အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုး ထက်ပိုပြီး ထွက်နိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူ အားလုံးက အဓိပ္ပါယ် တစ်ခုတည်းကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရင်တောင် တုန့်ပြန်မှုတွေဟာ သူတို့ရဲ့ Context ပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားနေဦးမှာပါ။ စာတစ်ပုဒ်ကို မိမိရဲ့ Context အရ အဓိပ္ပါယ်ပြန် ကောက်ချက်ဆွဲတာ (ကိုယ်လိုရာ ကိုယ်ဆွဲတွေးတာ) ကို Contextualise လုပ်တယ် ပြောလို့ ရပါတယ်။
တချို့စာတွေ (ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး စာတွေ) ဟာ Context-sensitive ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘက် Context မှာ အဓိပ္ပါယ် တစ်မျိုးဖြစ်ပေမယ့် ဟိုဘက်မှာတော့ တစ်မျိုး ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို Context-sensitive ဖြစ်တဲ့ စာတွေဟာ အငြင်းပွားဖွယ်တွေ ဖြစ်စေမှာကို ရှောင်ရှားဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အများသဘောတူ အဓိပ္ပါယ်တူ ယူဖို့ဆိုတာ Context အများမှာ မှန်တဲ့ စာရယ်လို့ ဆိုတာထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ Context တစ်ခုအတွက် စာဆိုရင် ပိုမှန်ပါမယ်။ ကျယ်ပြန့်ပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိတဲ့ Context တွေက နဂို ဦးတည်ချက်ကို ပျက်ပြားနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ သတိချပ်ရပါမယ်။ Cross-context ဖြစ်အောင် ပြောဆို ရေးသားမလားဆိုတာတော့ ရေးသူ ပြောသူဟာ Assertive ဖြစ်လား မဖြစ်လား (မိမိ မှန်ကန်ကြောင်း ရဲဝံ့စွာ ပြောဆိုမလား) ပေါ် မူတည်ပါတယ်။
စာဖတ်သူဟာ စာရေးသူနဲ့ Context အတူတူမှာ ရှိမနေတောင် စာရေးသူရဲ့ Context ကို သိထားမယ် ဆိုရင်လည်း စာရေးသူ ဘာကို ဆိုလိုတယ် ဘယ်ကို ဦးတည်နေတာလည်း ဆိုတာကို ခံစား နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို Context Aware ဖြစ်ဖို့ကလည်း စာဖတ်သူရဲ့ အမြင်ကျယ်မှု၊ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝမှု၊ စာရေးသူ အပေါ် နားလည်နိုင်စွမ်းနဲ့ စာရေးသူရဲ့ ပါးနပ်မှု ပေါ်မှာ မူတည်နေပါသေးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ စာရေးသူရော စာဖတ်သူပါ မိမိဘယ် Context မှာ ရှိနေသလဲကို အသေအချာမသိတဲ့ အခါတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ စာရေးသူ ဘယ် Context မှာ ရှိနေသလဲ စာရေးသူ ကိုယ်တိုင် မသိတာတော့ ညံ့ဖျင်းမှု ဖြစ်ပြီး စာဖတ်သူ ဘယ် Context ပေါ်မှာ ရှိသလဲ မသေချာတာကတော့ စာဖတ်သူရဲ့ ယိမ်းယိုင်လွယ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူဟာ စာဖတ်သူရဲ့ Context ကို မိမိ အစွမ်းနဲ့ ပြောင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူကတော့ စာရေးသူရဲ့ Context ကို မပြောင်းနိုင်ပေမယ့် စာတစ်ပုဒ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပြောင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ တိုင်းပြည် ကောင်းစားရေးအတွက် ပြောဆိုနေကြပေမယ့် Context တွေ မတူတဲ့ အတွက် အသံတွေ ခံစားချက်တွေဟာလည်း တူညီနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
pmmw - 5/19/08, 4:46 PM
You set me thinking.Very thoughtful post.
Mhaw Sayar - 5/20/08, 9:20 PM
ဒီဆောင်းပါးကတော့ အပေါ်က တစ်ယောက်ပြောသလိုပဲဗျ။ အတွေးအမြင် အသစ်တွေ ဆန့်ထုတ်ရင် ထုတ်သလောက် ရနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးပဲဗျာ။
Han Lynn Kyaw (Ray) - 5/21/08, 12:46 PM
Andy Myint - 5/21/08, 10:00 PM
ကျေးဇူးပဲ PMMW နဲ့ မှော်ဆရာ။
I didnt get what you said, Ko Han Lynn Kyaw. Anyway, thanks for reading.
စိုးထက် - Soe Htet ! - 5/22/08, 10:51 AM
"Cross-context ဖြစ်အောင် ပြောဆို ရေးသားမလားဆိုတာတော့ ရေးသူ ပြောသူဟာ Assertive ဖြစ်လား မဖြစ်လား (မိမိ မှန်ကန်ကြောင်း ရဲဝံ့စွာ ပြောဆိုမလား) ပေါ် မူတည်ပါတယ်။"
အရမ်းကို အဓိပ္ပါယ် ရှိ မှန်ကန် ပါတယ် ခင် ဗျာ ...
ကျေးဇူး ကိုအန်ဒီရေ ...
မုတ်သုန် - 5/22/08, 9:45 PM
Andy Myint - 5/23/08, 9:45 AM
ကိုစိုးထက်ကြီးကတော့ Assertive ဖြစ်ပါတယ်။ :)
ပန်းတစ်ဘက်တည်းကိုတောင် ကြည့်တာ အမြင်မတူနိုင်ဘူး မုတ်သုန်။